Xil Dalxa oo ka digay shaqaalaha rayidka ah ee lagu xujeynayo damiinka – Hornafrik Media Network
Wafdiga dowlada Qatar oo qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya iyo xogta shaqsiga ay…
Rooble oo ka hadlay xiisadda Muqdisho, amarna siiyey ciidamada dowladda
Siyaasiga Axmed Daaci oo Farmaajo u jeediyey hanjabaad la xariirta xiisada kacsan ee…
Xog Xasaasi ah- Yaa Amray, Yaase diiday weeraradii shalay Muqdisho ka dhacay?
Xil Dalxa oo ka digay shaqaalaha rayidka ah ee lagu xujeynayo damiinka
By Liibaan Nuur	 On Nov 23, 2019
Tan iyo markii qaraxii is-miidaaminta ahaa lagu dilay Allaha u naxariistee guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, lana shaaciyey in qaraxaas ay ka dambeysay gabar agaasime aheyd waaxaa dhashay kala shaki badan.
Kala shakigaas ayaa intiisa badan soo kala dhex galay shaqaalaha rayidka ah iyo madaxda hey’adaha dowladda federaalka, waxayna arintaas sababtay haatan in shaqaalaha dowladda lagu amaro in qof walba uu keeno xildhibaanka ku matala baarlamanka federaalka si looga qoro damanad.
Dowladda federaalka ayaa dhamaan shaqalaha wasaaradaha iyo hey’adaha kale ee dowladda waxay amartay in baaris lagu sameeyo, kadibna qof kasta loo diro xildhibaanka ku matala kursiga golaha shacabka ama aqalka sare si looga qoro damanaad amni.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka Soomaliya ayaa sheegay in arintaan ay tahay mid culeys siyaasaded lagu saarayo xildhibaanada.
“Arintaas damaanada ah waxaan u aragnaa mid lagu xujeynayo xildhibaanada, dowladdu markii ay qoraneysay shaqaalaha anagu uma aanaa geyn iyadaa qoratay, dadka qaarna waxaaba laga yaabaa inaysan laheyn xildhibaan ku matala baarlamaanka, marka qofka aana anigu qashada geyn ma garanayo waxaa la ii dhahaayo damiino, waxaan u arkaa culeys siyaasadeed oo baarlamaanka la saarayo” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Waxa uu intaas ku daray in shaqalaha qaar aysan damiina karin xildhibaanadu, isla markaana ay dowladda ka dalbanayaan inay si kale u maareyso arinta shaqaaleheeda.
“Dowladdu hanaga deyso go’aanka ah in xildhibaanku damiinto qof uusan garanayn waxa ka imaan kara, hadeysan dooneyn in meeshaas ceebu ka timaado, si kale ayey u maarey kartaa nidaamka ay u martay qorista ciidamada ayey u mari kartaa oo diiwaan galin casri ah ayey ku samey kartaa yeysan nagu dhibin anaga” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Dalxa.
Mudooyinkii u dambiyey hey’adda nabad sugidda Soomaliya ayaa waday baaris mid-mid loogu sameynayo shaqaalaha dowladda, iyadoo wasaarad kasta mar shaqaaleheeda loo yeerayo.
Wasiir ka tirsan xukuumadda oo looga yeeray golaha shacabka si loola xisaabtamo
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Miisaaniyaddii ugu badneed abid